13 qof oo ay ku jirto wariye Hodan Naaleeye oo ku dhintay weerar lagu qaaday huteel kuyaala magaalada Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubaland13 qof oo ay ku jirto wariye Hodan Naaleeye oo ku dhintay weerar lagu qaaday huteel kuyaala magaalada Kismaayo
13 qof oo ay ku jirto wariye Hodan Naaleeye oo ku dhintay weerar lagu qaaday huteel kuyaala magaalada Kismaayo
July 13, 2019 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Wariye Hodan Naaleeye. [Sawir Hore]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 13 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerar lagu qaaday huteel kuyaala magaalada Kismaayo.
Huteelka la weeraray oo la dhaho Cascasey ayaa markii hore gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa lala beegsaday xalay fiidkii iyada oo odayaal dhaqameed iyo xildhibaano ay halkaas ku shirayeen.
Qaraxa ayaa waxa daba socday dablay hubaysan oo gudaha u galay huteelka kuwaasoo ilaa xalay ka dagaalamayay.
Dadka weerarka ku dhintay waxaa kamid ah wariye Hodan Naaleeye oo ahayd asaasaha taleefishinka Integration, waxaa sidoo kale la dhintay ninkeeda oo la oran jiray Jaamac Fariid kaasoo xil wasiir ka soo qabtay maamulka Jubbaland, wariye Maxamed Sahal oo ahaa wariye katirsan TV-ka maxaliga ah ee SBC ayaa sidoo kale ku geeriyooday weerarkaas.
Ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarkaas ka dhacay gudaha Kismaayo, oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland.
May 2, 2019 Madaxweynaha Jubbland oo rajo ka muujiyay shirka Garoowe ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Masuuliyiin ka kala timid wadamo badan oo katirsan Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa ka [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland President has vowed to fight armed groups who are doing offenses in Puntland. Speaking to reporters in Garowe Friday Abdiweli Mohamed Ali said: “I want to tell Puntland people wherever they are to [...]